Beats by Dre waxay soo bandhigtay Powerbeats cusub oo cusub oo ah iskaashi ay la yeelaneyso hay'ada qabiilka FaZe | Waxaan ka socdaa mac
Beats by Dre wuxuu bilaabayaa Powerbeats Pro cusub iyadoo lala kaashanayo hay'ada FaZe Clan
Apple waxay sii wadaa inay soo saarto dhagaha dhagaha si ay u gaarto dhammaan noocyada isticmaaleyaasha. Iyadoo dhowaan la soo saaray AirPods Max, hadda waa markhaatiyaasha dhagaha ee aan sidaa usameyn ama tayo leh. Waxaa lagu sii daayay hoosta Beats shirkadda Dre ee hoosaadkeeda. Tani waxay calaamado fiican ku yeelatay ururka ciyaarta fiidiyowga ee 'FaZe Clan video game' waxayna bilaabeen waxay yihiin, waxaan ku dhiirranayaa inaan dhaho samaacadaha ugu dagaalka badan ee naqshadeynta dhammaan illaa iyo hadda oo waxaan u arkaa inay jiraan iyaga oo leh nashqado geesinimo leh. Swaxaan soo bandhigayaa Powerbeats Pro cusub.
Powerbeats Pro-ka cusub waxaa lagu soo bandhigi doonaa wax yar ka dib bulshada, in kasta oo aan horeyba u heysanay nooca iibka u sii socon doona iyadoo lala kaashanayo ururka ciyaarta fiidiyowga. FaZe Clan. Shirkadda Apple, Beats by Dre, iyadoo ay sabab u tahay wada shaqeynta ay la leedahay ururkan ayaa soo saartay samaacado cusub oo sameeya naqshad ugu dhiirran. Qaarkood casaan iyo codad madow Iyo naqshad u eg kambuul, waxaan haynaa dhagaha dhagaha dhagaha ee ugu dambeeyay sida ku xusan qaabka ugu badan ee shirkadda isboortiga
Waxaan la soo noqonay @FaZeClan loogu talagalay koolab cusub 3/22, si gaar ah iyada oo loo marayo @Nacaybtire.
Xirmooyinka daabacan ee kooban ee PS ayaa loo qabanayaa. U diyaar garow inaad #FaZeUp! https://t.co/fvb7yZUp6Y pic.twitter.com/Lz5GcVK31f
- Beats by Dre (@beatsbydre) March 19, 2021
FaZe Clan waa a xirfad fiidiyoowga ururka ciyaarta iyo madadaalada ciyaarta. Waxay ka kooban tahay ciyaartoy dhowr ciyaarood oo caan ah, oo ay ku jiraan "Call of Duty," "Rocket League," iyo "Counter-Strike: Global Offensive." Qaabkan cusub ayaa la qiyaasayaa in la bilaabi doono 22-ka Maarso.
Daabacaadda xaddidan ee 'Beats FaZe Clan Powerbeats Pro' waxay isku darsameysaa adduunka cayaaraha xirfadeed iyo isboortiga dhaqameed leh hal headset aad u baahan tahay si aad madaxaaga ciyaarta ugu hesho. Dhageystayaasha waxay ka muuqdaan camo shabeel caan ah oo FaZe ah iyo astaanta FaZe Clan ee dacwadda lagu soo oogayo. Kuwani waxay xushmeeyaan maqaarka sare ee aadka ujecel ciyaarta toogashada qofka ugu horreeya. Marka lagu daro FaZe Clan Powerbeats Pro, waxaad fursad u heli doontaa inaad hesho tiro kooban oo ah Xirmooyinka Ururiyaha. Waxaa loo heli karaa iibsashada iyada oo lagu sawirayo NTWRK 22-ka Maarso. Xirmooyinkaani waxaa ka mid ah Ben Simmons 1 Saxiixa T-Shirt. Kaararka ganacsiga ee la aqoonsan yahay oo la saxiixay Upper Deck FaZe. Oo la saxeexay kubbadda Kolayga FaZe.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Beats by Dre wuxuu bilaabayaa Powerbeats Pro cusub iyadoo lala kaashanayo hay'ada FaZe Clan
Apple ayaa lagu xukumay inay bixiso 300 milyan oo doolar kadib markii uu ku xadgudbay patent-ka DRM
Shirkadda wax soosaarka ee Natalie Portman waxay heshiis iskaashi la gaadhay Apple TV +